Ababeshiye i-IFP sebeyabuya manje: Buthelezi – LIVE Express
uMengameli we-Inkatha Freedom Party (IFP), iNkosi Mangosuthu Buthelezi, uthi amanye amalunga ayeshiye leli qembu ngaphambilini, ajoyina amanye amaqembu, aseyabuya manje emva “kokuzwa amanzi ngobhoko” kwamanye amaqembu.
Ukusho lokhu ngenkathi ethula usomqulu wezethembiso zokhetho (manifesto) waleli qembu enkundleni yezemidlalo, i-King Zwelithini Stadium, eMlazi, ngeSonto, ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya oluzobe lumhla zintathu ku-August 2016.
“Abanye abakule nkundla bangamalunga abuyele ku-IFP njengoba sebezwile amanzi ngobhoko kwamanye amaqembu, bafumana ukuthi ayikho impela indawo efana nasekhaya, ku-IFP,” kusho uButhelezi enanelwa wumsindo wenhlokomo.
Emva kwalokho lo mholi ube esekhuluma sakumemeza ethi: “siyanemukela ekhaya ma-comrades. Sithokoza kakhulu ngokubuyela kwenu ku-IFP. Ihlale ikhona indawo yenu emndenini wenu i-IFP. Siyakwazisa ukuba khona kwenu ezikhundleni enazishiyayo zenu ku-IFP. Siyabonga amavoti ethu ayehambe ngephutha enibuya nawo,” kumemeza uButhelezi nobenanelwa yinhlokomo yezinkulungwane zabalandeli be-IFP.
Eminyakeni eyedlule leli qembu belilokhu lehlelwa ukwesekwa nokuye kwagqama kakhulu ngenkathi kusungulwa i-National Freedom Party (NFP), eholwa yilowo owayenguSihlalo wayo i-IFP futhi owayengaconsi phansi kubalandeli be-IFP, uZanele kaMagwaza-Msibi.